काेराेनाले वितण्डा मच्चाइरहेका बेला जर्मनीले अमेरिकामाथि लगायाे चोरिको आरोप, के भन्छन ट्रम्प ? — Imandarmedia.com
१ओली सरकारले रेशम चौधरीको कुन–कुन माग पूरा गर्दैछ ?
२गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको खाली स्थानमा ३५ दिनभित्रै उपचुनाव गर्नुपर्ने
४बाँके भेरी अस्पतालमा ३ घण्टामा ३ संक्रमितको मृत्यु
५कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, पार्टी हृवीप उल्लंघन गर्ने तीन प्रदेशसभा सदस्य बने मन्त्री
६सर्वदलीय बैठक सकियो, के के भयो निर्णय
७शहरी क्षेत्रका विद्यालयआगामी वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्न सिफारिस
८सर्वदलीय बैठकमा सभामुख विरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीको आक्रोश
९साहित्यकार श्यामदास वैष्णवको निधन
१०गर्मी बढेसँगै सर्लाही सदरमुकाम तराईकामा लामखुट्टेको प्रकोप ह्वात्तै बढ्यो
११ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नजाने प्रचण्ड
काेराेनाले वितण्डा मच्चाइरहेका बेला जर्मनीले अमेरिकामाथि लगायाे चोरिको आरोप, के भन्छन ट्रम्प ?
काठमाडौं । अमेरिकाले तीन लाख बटाभन्दा बढी मास्क चोरेको जर्मनीले आरोप लगाएको छ । जर्मन लैजान ठिक्क पारिएका तीन लाख बटाभन्दा बढी मास्क अमेरिकातर्फ लगिएपछि जर्मनीले अमेरिकामाथि ‘आधुनिक डकैती’ को समेत संज्ञा दिएको छ ।
जर्मन मन्त्री गिजेलले त्यसरी बर्लिन ल्याउन लागिएको मास्कलाई अन्यत्र लगिनु ‘आधुनिक डकैती’ सरह भएको बताए। उनले ट्रम्प प्रशासनलाई व्यापारका नियम मान्न भनेका छन्। विश्वव्यापी महामारीले संकट भएकाबेला जबरजस्ती नगर्न पनि उनले चेतावनी दिएका छन् ।
बर्लिनस्थित एक स्थानीय सरकारले अमेरिकामा बनाइएका ती मास्क ब्याङ्ककमा जफत गरिएको बताएको छ। बर्लिनको प्रहरीका निम्ति मगाइएका ती एफएफपीटू मास्क गन्तव्य पुग्न नपाएको बीबीसीले जनाएको छ ।
बर्लिनका आन्तरिक मामिलामन्त्री आन्द्रियास गिजेलले ती मास्क अमेरिकातर्फ लगिएको ठानिएको बताएका छन् । मास्क निर्माता अमेरिकी कम्पनी थ्री एमलाई कोरियाली युद्धताका निर्मित कानुनको उपयोग गर्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना उत्पादन अन्य देशमा निर्यात गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाइदिएका थिए।
ट्रम्पका अनुसार झन्डै दुई लाख एन९५ रेस्पिरेटर मास्क, एक लाख ३० हजार सर्जिकल मास्क तथा छ लाख पन्जा जफत गरेर अमेरिकी अधिकारीहरूले कब्जामा लिएका छन्। यसैबीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मास्क लगाउने सुझाव आफ्ना लागि नभएको भन्दै मास्क प्रयोग गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।
सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एण्ड प्रिभेन्सन (सिडिसी) ले हरेक अमेरिकीलाई घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन वा रुमाल मुख छोप्न आग्रह गर्दै नयाँ स्वास्थ्य सुझाव जारी गरीरहँदा ट्रम्पले भने मास्क प्रयोग नगर्ने बताएका छन् । उनी कोरोना भाइरस टास्क फोर्सको शुक्रबारको नियमित ब्रिफिङ्गमा मास्कबिनै प्रस्तुत भएका थिए ।
आफू मास्क लगाएर राष्ट्रपति कार्यालयमा हुने विभिन्न देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राजा, महारानीहरुसँगको भेटमा प्रस्तुत हुने कल्पनासम्म नगरेको ट्रम्पले बताएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले मास्कका सम्बन्धमा सिडसीले शुक्रबार जारी गरेको सुझाव स्वइच्छामा आधारित रहेको बताएका छन् ।
‘तपाईंहरुले पनि यसको पलना गर्नु पर्दैन । मलाई लाग्दैन कि मैले पनि यसको पलाना गर्नेछु,’ ट्रम्पले भने, ‘ मास्क लगाउने सुझावहरु मेरा लागि हैनन् ।’
अमेरिकामा एकैदिन १ हजार ३२० को मृत्यु, ३२ हजार बढी नयाँ संक्रमित
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण अमेरिकामा पनि तीव्र देखिएको छ । अमेरिकामा पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ३२० जनाले ज्यान गुमाएसँगै मृत्यु हुनेको संख्या ७ हजार ३९१ पुगेको छ ।
अमेरिकामा एकैदिन ३२ हजार ०८८ जनामा संक्रमण देखिएसँगै संक्रमित हुनेको संख्या २ लाख ७६ हजार ९६५ पुगेको छ । चीनको वुहानबाट शुरु भएको कोरोना संक्रमणको दर यूरोपियन मुलुक हुँदै पछिल्लो सुमय अमेरिकामा तीव्र देखिएको छ ।
अमेरिकामा संक्रमितमध्ये १२ हजार २८३ जना उपचारपछि निको भएका छन् । ५ हजार ७८७ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ भने २ लाख ५७ हजार २९१ जना उपचाररत छन् । यसैबीच, विश्वव्यापी रुपमा कोरोना भाइरसका कारण एकैदिन ५ हजार ९७२ जनाले ज्यान गुमाएसँगै मृत्यु हुनेको संख्या ५९ हजार १४० पुगेको छ ।
संक्रमितको संख्या विश्वमा १० लाख ९७ हजार ८१० पुगेको छ । एकै दिन ८२ हजार ७४५ जनामा संक्रमण देखिएको जनाइएको छ । संक्रमितमध्ये २ लाख २८ हजार ४०५ जना उपचारपछि निको भएका छन् ।